प्रधानमन्त्रीले सोधे-सुरुङ निर्माण समयमै सकिन्छ ? – rastriyakhabar.com
प्रधानमन्त्रीले सोधे-सुरुङ निर्माण समयमै सकिन्छ ?
काठमाडौं । आइतबार अपराह्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नागढुंगा (सिस्नेखोला–दहचोक) सुरुङमार्गको निर्माणस्थलमा पुगे । इन्द्रदह महोत्सवमा सहभागी भएर फर्किने क्रममा उनी नागढुंगा सुरुङको अवलोकनका लागि पुगेका थिए ।
किलोमिटर लामो यो सुरुङमार्ग ४२ महिनामा निर्माण गरिसक्ने योजना छ । तर, ४२ मध्ये १६ महिना समय बितिसकेको छ ।